Soo dejisan Sophos Home 2.1.2 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Sophos Home
Sophos Home – software si looga hortago khatarta amniga kombiyuutarka iyo ilaalinta shabakada. Software waa codsi maxaliga ah oo leh interface minimalist iyo dhowr koontaroolo, tallaabooyinka ugu muhiimsan iyo qaabeynta qaababka amniga waxaa lagu sameeyaa online iyada oo loo marayo guddi web ah oo ka socda browser kasta. Sophos Home waxay bixisaa bilawga, muddada dheer ee kombiyuutarka si loo soo saaro raadadka iyo haraaga nacaybka, sidoo kale waxay u adeegtaa si ay ufilisho raadinta xiga iyadoo la calaamadeynayo faylasha aan khasaare ahayn ee aan u baahnayn in mar labaad la hubiyo. Sophos Home waxay bixisaa heer aad u fiican oo looga hortago khatarta ah waxayna kuu ogolaaneysaa inaad aragto macluumaadka ku saabsan waxyaabaha la xakameynayo, oo waxaad dib u soo celin kartaa barnaamijyada khafiifka ah si khalad ah loo go’aamiyay aagga karantiiliga. Nidaamka la dhisay oo loogu talagalay soo dejinta xasiloonida waxay ku saleysan tahay qiimeynta sumcadda faylka iyo jawaab-celinta kombiyuutarrada kale, waxayna ku talineysaa in laga boodo soo dejinta haddii qiimeynta faylka ay hooseyso. Sophos Home wuxuu halis ku yahay oo laga yaabo in uu khalkhal geliyo bogagga ay ku jiraan khayraadka shabakada ee phishing iyo URL been abuur ah.
Ka hortagga khatarta dhabta ah
Badbaadinta lidka ku ah khalad aan la aqoon
Ka mamnuuc bogagga shabakada phishing
Tiknoolajiyad casri ah oo looga hortagayo ransomware
Xakamaynta amniga fog
Soo dejisan Sophos Home
Faallo ku saabsan Sophos Home
Sophos Home Xirfadaha la xiriira